Maalinta Xoriyadda Saxaafadda oo maanta dalka laga xusay – Radio Muqdisho
Maalinta Xoriyadda Saxaafadda oo maanta dalka laga xusay
3-da May, waa maalinta Xoriyadda Saxaafadda ee Dunida oo dhan, Sanadkan waxaa cinwaanku yahay Hubinta Awoodda Maamulada, Warbaahinta, Cadaaladda iyo Sharciga, Dabaaldegyada sanadkan 2018.
Siiyaha Wasiirka Warfaafinta ahna Kuxigeenka Wasiirka Warfaafinta iyo masuuliyiin kale ayaa maanta ka qaybgalay Munaasabo kala duwan oo lagu qabtay magaalada Muqdisho iyagoo hambalyo u diray dhamaan suxufiyiinta.
“Maanta meesha aan ka joogno Xorriyadda hadalka qiyaastii waddamada gobolka in badan oo ka mid ah baan uga horreynaa, taas oo ku timid dhabar adeeggii ay u soo galeen Suxufiyiinta Soomaaliyeed oo dil, dhaawac iyo dhibaatooyin kaleba kala soo kulmay hasa ahaatee mirihii maanta la joogo”. ayuu yiri sii haayaha Wasiirka Warfaafinta.
Mudane Cabdirixmaan Iidaan Yoonis ayaa sheegay ayaa sheegay in Wasaaraddu ay si hagar la’aan ah uga shaqeyn doonto xaqiijinta xoriyadda iyo badbaadada saxaafadda, sidoo kale Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in Wasaaradda ay ku mashquulsan tahay sidii xiriirkooda loo adkeyn lahaa Warbaahinta, wuxuuna tilmaamay in ay rajeynayaan in dhawaan ay Baarlamaanka ansixiyaan xeerka Saxaafadda.
Dhamaan madaxdii kale iyo masuuliyiintii hadashay ayaa hoosta ka xariiqay sida ay lagama maarmaan u tahay in suxufiyiinta Soomaaliyeed ay helaan dhowritaan (Protection) iyo in ay dhamaanta la xisaabtan la’aanta kuwa tacadiyada u geysta bahda warbaahinta Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda oo kulan maamuus ah u sameeyey Xulka Qaranka ee da’doodu ka yar tahay 17-ka sano